Jun 23, 2021 05:49 PM Merolagani
गतिशील आविष्कारहरुको कुरा आउँदा बेजोस डिमान्डिङ्ग र गोप्य हुन्थे
एमेजन, एप्पल, गुगल र फेसबुक जस्ता कम्पनीहरुका लागि प्रतिस्पर्धी लाभ सर्वोपरि छ। र त्यो तब हुन सक्दैन जब सबैले तपाई त्यसमा काम गरिरहनु भएको छ भन्ने थाहा पाउछन्।
ल्याब१२६ एमेजनको प्रयोगशाला हो। उनीहरु हार्डवेयर र उपभोक्ता विद्युतीय डिभाइसहरु विकास गर्थे, जसको पहिलो उत्पादन किन्डले हो। इन्साइडरहरुले उनीहरुको परीक्षणलाई ‘प्रोजेक्ट ए’ भन्थे, जुन २००७ को किन्डले थियो, ‘प्रोजेक्ट बी’ जुन फायरफोन, ‘प्रोजेक्ट डि’ जुन इको थियो।
ल्याब १२६ मात्र त्यस्तो एक ठाउँ थियो जहाँ बेजोस आविष्कार र नवीनताको माग गर्थे। एमेजनमा भएका प्रत्येक व्यक्तिहरुसँग नयाँ कुरा सिर्जना गर्न (आविष्कार) र अहिले भएको कुरालाई सुधार गर्न (नवीनता) को अपेक्षा गरिन्थ्यो। एमेजनमा नवीनताको संस्कृति बोलीभन्दा धेरै टाढा थियो। एमेजनका हरेक कर्मचारी उनीहरुको आईडिया कार्यान्वयन गर्न आवश्यक श्रोतहरु दिइन्थ्यो।
बेजोसले ग्राहकहरुसँग शुरु गरे र पछिल्तिर काम गरे
बेजोसको यो दृष्टिकोणलाई एमेजनको नेतृत्व सिद्धान्त–ग्राहकको विचार, मा पनि चित्रित गरिएको थियो। शीर्ष व्यक्तिहरु प्रतिस्पर्धीहरुमा ध्यान दिन्छन् तर उनीहरुको ग्राहकसँग पनि लगाव हुन्छ।
कस्टुमर अब्सेस्ड व्यवसाय बनाउनका लागि तपाईले ग्राहकको मनोभावना बुझ्नुपर्छ
अहिलेका अधिकांश व्यवसायहरुले आफुले ग्राहकहरुका ख्याल गर्ने गरेको बताउँछन्। ‘ग्राहक सँधै सहि हुन्छन्’ भन्ने वाक्यभन्दा बढी केही नहेर्नु। तर वाक्य आफै ‘प्रतिक्रियात्मक’ धारणामा ढल्किएको छ।
अरुलेभन्दा अघि लाखौ ग्राहकहरुको कारोबारको प्रयोग गरी एमेजनले ग्राहकहरुले के चाहन्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउने प्रयास गरेको थियो। एमेजनले जहिले यी प्रश्नहरु सोध्थेः
१) ग्राहक को हुन्?
२) ग्राहक समस्या हो कि अवसर?
३) सबैभन्दा महत्वपूर्ण ग्राहक फाइदा के हो?
४) ग्राहकलाई के चाहिन्छ कसरी थाहा पाउनु हुन्छ?
५) ग्राहकको अनुभव कस्तो देखिन्छ?
एमेजनले इकोमा दाउ खेल्यो, जब कसैले त्यसलाई वास्ता गरेकाे थिएन
बजार सर्वेक्षणले काम गर्दैन। यदि तपाई सन् २०१३ मा ग्राहकलाई ‘के तपाईलाई भान्सामा कालो, प्रिंगलको साइज जत्रो, जसलाई तपाई प्रश्न सोध्न र कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा बत्ती पनि बल्ने र गीत पनि बजाउन मिल्ने, सँधै अन भइराख्ने सिलिण्डर चाहिन्छ?’ भनेर सोध्नुभयो भने पक्कै पनि उसले तपाईलाई अजिब तरिकाले हेरेको हुनुपर्छ र भनेको हुनुपर्छ, ‘चाहिँदैन, धन्यवाद।’
ग्राहकको पैसा बचाउन एडब्लुएस आफ्नो नाफा घटाउन चाहिरहेको थियो
एमेजनले आफ्ना सपोर्टमा सुधार गर्दै र ग्राहकलाई प्रभावकारी बनाउने नवीन उपकरणहरु थप्दै एडब्लुएसको मूल्य पछिल्लो ७ वर्षमा २७ पटक घटाइसकेको छ। एडब्लुएसको विश्वासिलो सल्लाहकारले ग्राहकलाई कहाँ सुधार गर्ने अवसर छ, सुरक्षा बलियो बनाउन र पैसा बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु सूचीत गर्दछ। ग्राहकले साँच्चै नै यस सुविधा, जुन त्यतिबेला भर्खर शुरु भएको थियो, त्यसबाट लाखौ रुपैयाँ बचाएका थिए।
बेजोसले दीर्घकालिन नाफाका लागि अल्पकालिन बलिदानी दिए
व्यवसायमा कठिन निर्णयहरु लिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरुले यस्ता रणनीति अपनाउनु पर्ने हुन्छ जसले परिणाम दिन धेरै वर्ष लाग्न सक्छ, तर वालस्ट्रीटले त्यति राम्रोसँग व्यवहार गर्दैन। जब एप्पलले हरेक यूनिटको त्रैमासिक बिक्री रिपोर्ट प्रकाशित गर्ने अभ्यास गर्ने घोषणा गरेको थियो, त्यही दिन त्यसको शेयरमूल्य ६.६ प्रतिशत घटेको थियो। त्यसैगरी, एप्पललाई मान्छ कि म्याक र आईफोनहरुको ९० दिने प्रदर्शन उसको उत्पादन क्षेत्रको अन्तरनिहित शक्तिका लागि एक प्रोक्सी होइन, एमेजन यो ट्रेण्ड कम गर्न तयार छ, दीर्घकालिन ग्राहक निष्ठा र उत्पादन अवसर जसले त्यसपछिका वर्षहरुमा अझ धेरै धेरै नाफा दिन्छ, त्यस्तोमा लगानी गर्न उनले यो वर्षको नाफाको बलि चढाए।
बेजोसले सम्भावित लगानीकर्ताहरुसँग कम्पनीको दर्शन अनुसार स्थिर भइराख्न अनुरोध गरेको छ। बेजोसले भनेका छन्ः
‘हामी हाम्रो आधारभूत व्यवस्थापन र निर्णय लिने दृष्टिकोण तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छौँ ताकि, तपाई, हाम्रा शेयरधनीहरु हाम्रो लगानी दर्शनसँग स्थिर छ भन्ने विश्वास गर्न सकोस।’
लगानीकाे नयाँ तरिका सिकाउने 'रिच ड्याड्स गाइड टु इन्भेष्टिङ्ग' काे पुस्तक सारंश
Sep 15, 2021 06:22 PM
Sep 08, 2021 05:53 PM
Sep 01, 2021 06:10 PM
Aug 25, 2021 06:16 PM
Aug 18, 2021 06:47 PM
Aug 11, 2021 06:54 PM
लकडाउनमा भएको क्षतिको हिसाब किताब गरी त्यसलाई पुर्ति गर्न व्यापारी लागेकाले मूल्य बृद्धि भयाे:अध्यक्ष बानियाँ
Sep 17, 2021 06:20 PM
दसैं नजिकिदै गएको छ । अरु बेला भन्दा दसैंको समयमा खाद्य बस्तुदेखि लगाकपडाहरुको मूल्य बृद्धि एकदमै हुने गर्छ । मूल्यबृद्धिसँगै दसैंको समयमा अखाद्य बस्तुको बिक्री पनि त्यतिकै बढी हुने गर्छ । खासगरी, दसैंमा अत्याधिक खपत हुने मासु, मिठाइलगायतका खाद्य बस्तुमा अखाद्य पदार्थ मिसाउने गरिन्छ ।
नेप्से घट्दा शेयर किन्दै नागरिक स्टक डिलर
Sep 17, 2021 05:33 PM
शुक्रबार देशभरमा १,५५८ कोरोना संक्रमित थपिए, १० जनाकाे निधन
Sep 17, 2021 05:19 PM
ओरालो लागेको शेयर बजारमा सबैभन्दा बढी प्रेसर बीमा कम्पनीमा ? वाणिज्य बैक समूहमा ठुलो असर नदेखिनुको कारण यस्तो छ
Sep 17, 2021 04:46 PM
दुई महिनामा ११ सय किलो सुन आँउदा पनि बजारमा अभाव बढ्दै, कोटा बढाउन दबाव दिँदै व्यवसायी
कुलमानसँग कुरा नमिल्दा सेवाप्रदायकले बनाए इन्टरनेट शुल्कलाई हतियार, कुलमान भन्छन्‘ याे सब मूल्य बढाउने बाहाना हो’
Sep 17, 2021 02:21 PM